Shiinaha Xarig cadaadis kulul oo tolmo wanaagsan leh oo lagu xardhay alwaaxda wax soo saarka iyo warshad | Bamboo Dahab ah
Dusha sare ee alwaaxa laamida la duubay ayaa leh dabiici dabiici ah oo toosan. Guddigu wuxuu leeyahay qaab-dhismeedka bamboo dabiici ah. Intaa waxaa dheer, qaab-dhismeedkeedu wuu ka duwan yahay, iyo saameynta qurxinta sidoo kale way ka duwan tahay. Marka la barbardhigo alwaaxda guud ee adag, awoodda farsamaysan ee bamboo lakabeedka ayaa ka sarreeya, isugeynta hoos u dhigistu way ka yar tahay. Qurxinta dibedda ee REBO waxay ka kooban tahay 18mm bamboo qaro weyn leh, oo horeba saliideysnaa isla markaana leh cutubyo dhinac ah.
Bamboo la tolay ayaa lagu soo saaray iyada oo loo marayo nidaam gaar ah oo isticmaala 100% ee Bamboo Moso, taas oo ka dhigaysa mid adag oo ka sii adkeysi badan bamboo caadi ah. it waa ka xoog badan yahay kana adag yahay kaynta. Bamboo la tolay ayaa ah mid ka mid ah xulashooyinka sagxadda ee ugu adag ee la heli karo, kana adag dhirta adag ee caadiga ah. Dhirta dhoobada dhogorta leh ee la tolay iyo sagxadaha ayaa u adkaysi badan qoyaanka marka loo eego dabaqyada kale ee bamboo iyo walxo kale. REBO gogosha bamboo waxay kuu noqon doontaa xulasho wanaagsan oo walxo ah.
Boodhka Bamboo wuxuu leeyahay dhexroor yar, gidaar godan iyo fiiqan weyn, qaab dhismeedkiisuna aad ayuu uga duwan yahay kan qoryaha. Awoodda iyo cufnaanta bamboo ayaa ka sarreeya tan alwaaxda caadiga ah, sidaa darteed, xoogga alaabada guddiga bamboo waa ka weyn yahay kuwa alwaaxda caadiga ah laga sameeyo. Boodhka bamboo wuxuu leeyahay qaab toosan oo siman, midab fudud, fudud oo loo caddeeyo, dheeh iyo kaarboon. Bamboo waa la farsameyn karaa si ay u noqoto xalka ugu wanaagsan ee loo jeexayo meelaha banaanka ah sida barkadaha dabaasha, barxadaha, iyo waddooyinka.
Dusha sare ee alwaaxa laamida la duubay ayaa leh dabiici dabiici ah oo toosan. Guddigu wuxuu leeyahay qaab-dhismeedka bamboo dabiici ah. Intaa waxaa dheer, qaab-dhismeedkeedu wuu ka duwan yahay, iyo saameynta qurxinta sidoo kale way ka duwan tahay. Marka la barbardhigo alwaaxda guud ee adag, awoodda farsamaysan ee bamboo lakabeedka ayaa ka sarreeya, isugeynta hoos u dhigistu way ka yar tahay. Qurxinta dibedda ee REBO waxay ka kooban tahay 18mm bamboo qaro weyn leh, oo horeba saliideysnaa isla markaana leh cutubyo dhinac ah. Dhammaan afarta geesood waa la sharraxay, sidaa darteed way fududahay oo raaxo leh in lagu socdo sagxadda bamboo. Marka santuuqa baasaboorka uu jiro, looxku waxyar ayuu sii kala go'aa si aysan biyuhu u istaagin hawaduna u wareegi karto. Qaybta kore ee bamboo waxay leedahay dhinacyo siman, xardhan oo leh dahaadh aan siibasho lahayn. Waxaa sidoo kale lagu dhejin karaa si gooni gooni ah labada dhinac.
Xiga: Midab madow oo aan lahayn sabuuradda bamboo qaloocsan
Guddiyada Baakada Bamboo
Guddiyada Carbonized Strand-ka leh tolmo wanaagsan Oo Lagu Xidho